कुवेत लैजाने भन्दै ३ सयजनालाई ठगी, न्यायका लागि विभाग धाउँदै युवा (भिडियो सहित )::kamananews
काठमाडौं । पछिल्ला तीन दिनदेखि बिहानको १० बज्न नपाउँदै युवाहरुको एक समूह वुद्धनगरमा रहेको वैदेशीक रोजगार विभाग अघिल्तिर जम्मा भइहाल्छन् ।
धेरैजनाको एउटै स्वर हुन्छ–पक्राउ परेको दलालले रकम दिन नमाने दलाललाई हाम्रो जिम्मा दिनुस् हामी निकाल्छौं हाम्रो पैसा ।’ आक्रोशित अवस्थामा रहेका सयभन्दा बढी युवा मंगलबार र बुधबार पनि दिनभर विभागको अघिल्तिर जम्मा भएका थिए ।
तीमध्ये कतिले भन्दैथिए– हामीजस्ता तीनसय युवालाई कुवेत लैजाने भनेर पैसा उठाएर भाग्यो । अहिले पक्राउ गरेर विभागमा ल्याइएको छ । न विदेश पठायो न पैसा नै फिर्ता गर्यो ।”
तर भीडमै रहेका केही युवाले तीनसय एउटै कम्पनीमा पठाउने भनेर ठगी गरेको बताउँछन् भने कतिले त्यो संख्याा ६ सय रहेको पनि दाबी गर्छन् ।
कतिजना ठगिएका छन् भन्ने विभागलाई समेत जानकारी छैन ।
काठमाडौं जयबागेश्वरीमा रहेको बजाज ओभरसिजका प्रेम सिँह नामका व्यक्तिले कुवेतका दुई कम्पनी ग्लोबल एक्सन र गल्फ कोस्टमा काम लगाईदिने भन्दै कम्तिमा पनि ३ सय जनासँग १५ हजारदेखि २ लाखसम्म रकम उठाएका थिए ।
सबै युवालाई नक्कली कागजात बनाएर देखाउने अनि पैसा असुल्ने काम गरेका थिए ।
“सबै कागजपत्र उसले सक्कली जस्तै बनाएको रहेछ, हामीले पनि होला भन्ने विश्वास गर्यौं, आखिर धेरै महिनासम्म पनि नउडाएपछि हामीले खोजी गर्दै जाँदा सबै कुरा गलत सावित भयो” ठगीनेमध्ये कैलालीका एक युवाले भने ।
प्रहरीले पक्राउ गरी मंगलबार विभागमा बुझाएपछि भेला भएका ती यूवा बुधबार पनि बिहानैदेखि त्यसैगरी गेटको वरिपरी घुमिरहेका थिए ।
विभागमा उपस्थित गराइएको भएपनि समय अभावका कारण हिरासतमा राखेको प्रहरीले बुधवार बिहान ११ बजेतिर जब प्रेमसिंहलाई गाडीमा राखेर ल्याउँदै गर्दा युवाहरु गेटमै बसिसकेका थिए ।
प्रहरीले जबर्जस्ती भीड पन्छाएर सिँहलाई भित्र लगेपछि गेटबाहिर रहेका पीडित युवाहरु झनै आक्रोशित भएका थिए ।
उल्टै पीडितलाई धम्क्याउने !
गेटमा रहेका युवाहरुको समूहलाई आफू प्रहरी अधिकृत भएको बताउँदै सिँह नजिकका व्यक्तिले युवालाई नै धम्क्याउने गरेका थिए । आक्रोशित युवाहरुले ‘प्रहरी हुँ’ भन्दै धम्क्याउने दुईजनालाई कुटपीट गर्न लागेपछि प्रहरीले ती दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीका अनुसार ती वास्तविक प्रहरी भने होइनन् ।
को हुन् प्रेमसिंह ?
सर्लाही घर बताउने प्रेम सिँह पनि वास्तविक नाम नभएको विभाग स्रोतको दाबी छ । उनको वास्तविक नाम भने रामेश्वर सिंह भएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उनी अघिल्लो वर्षदेखि नै सयौं युवाहरुसँग रकम उठाएर सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
युवाको माग–हामीलाई हाम्रो पासपोर्ट र पैसा चाहियो
“सबैसँग रकम उठाएर गुमनाम भएको व्यक्तिलाई हामीले नै पक्राउ गरेर प्रहरीमा बुझाएका छौं, अब हामीले न्याय पाउनुपर्यो । हामीले त्यो व्यक्तिलाई भौतिक कारवाही गरेका छैनौं, त्यस्तो हाम्रो सोचाई पनि छैन, हामीलाई हाम्रो पासपोर्ट र बुझाएको पैसा चाहियो । त्यो अब वैदेशिक रोजगार विभाग र सरकारको कर्तव्य हो । यदि हामी सक्दैनौं भन्ने हो भने ती व्यक्ति हाम्रो जिम्मामा दिनुपर्यो,” अधिकांश युवा एउटै स्वरमा विभागको गेटमा चिच्याइरहेका भेटिन्छन् ।
विभाग भन्छ – बयान लिदैछौं
वैदशिक रोजगार विभागले यस बिषयमा अनुसन्धान शुरु गरिएको बताएको छ । विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले भने, “हामीले अनुसन्धान शुरु गरिसकेका छौं । मंगलबारदेखि हामीले बयान लिएका छौं । बाँकी अनुसन्धान पनि गर्दैछौं । उनीबाट कति ठगिएका छन् भन्नेबारेमा पनि अनुसन्धान हुँदैछ । अनुसन्धान पूरा गरेपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न ।”
प्रवक्ता अधिकारीले कतिले रकम बुझाएका हुन् या कति जना ठगिएका हुन् भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट नभए पनि सयौं ठगिएको अनुमान गरिएको बताए । उनले भने, “यति नै भन्न्ने संख्या एकिन छैन तर ३ सय जति ठगि गरेको भन्ने कुरा आएको छ । केही पीडित अझै विभागमा आइसकेका छैनन् ।”
बैशाख । नेपाली समाज सेक्सका मामिलामा पछिल्लोपटक उदार बन्न थालेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ‘रेड लाइट’ एरिया छैन् । लुकीछिपी यौन व्यवसाय भने फस्टाइरहेको छ । नेपालको कानुनले यौन व्यवसायलाई अवैध मानेको छ ।...
बुटवल, ६ बैशाख । गुन्डा नाईके मनोज पुनका सहयोगीहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन । हिजो मात्र रुपन्देही प्रहरीले पुनको अपराध यात्रामा सहयोग गर्ने पाँच जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको प्रहरीले पुनलाई सहयोग गरेको...
चितवन, ६ वैशाख । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देश भित्र र बाहिरका शत्रुहरु अस्थिरता पैदा गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै सुरक्षालाई मजबुत बनाउन निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको निरीक्षणपछि आज बिहान निर्देशन दिँदै मन्त्री...
बैशाख, चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा माझी र मुसहर बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार पश्चिम चितवनको मेघौलीमा अल्पसंख्यक समुदायका ९ वर्षीय अरुण मुसहर र साढे ४ वषर्ीय...
६ वैशाख २०७५ काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाम एकताका लागि कस्सिए पनि यसको निचोडका सम्बन्धमा अल्झिएका छन् । विहीबार दुवैले अनौपचारिक भेट गरेका...
हेर्नुहोस यी हुन् वर्ष २०७४ का ‘चर्चित’ अपराधिक घटना
२०७४ सालको सुरुवातदेखि नै प्रहरी संगठन भित्र विभिन्न उतारचढाव आए। जसका कारण अदालत र सरकारबीच नै दरार पैदा भयो। आइजिपी नियुक्तिको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको भएपनि त्यसले प्रहरीको काममा भने खासै फरक पारेन। यो...
सरकारविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन चर्किदै
सरकारले यातायात व्यवसायीहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै ठूला पाँच वटा यातायात व्यवसायी समितिहरूले केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सिण्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा यातायत व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । काठमाडौंमा...
बिस्केट जात्राको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना समातिए
भक्तपुरको बिस्केट जात्रामा खटिएका प्रहरीमाथि ढुंगामुढा भएको छ । जात्राको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि भक्तपुर नगरपालिका–३, तौमडीचोकमा बिहीबार बिहान ०२ः१५ बजे ढुंगामुढा भएको हो । प्रहरीले बिस्केट जात्रामा ढुंगामुढा गर्ने र खुकुरी देखाएर अराजक गतिविधि देखाउने...
‘बाजेको सेकुवा’का सञ्चालक चेतन भण्डारीको पनि संलग्नता देखियो ‘ ३३ केजी सुन तस्करमा , पूर्व डिआईजी पनि अनुसन्धान घेरामा !
काठमाडौँ । फ्लाई दुबईको विमानबाट आएको ३३ किलो सुन विमानस्थल कटाएर अर्को व्यक्तिलाई ह्याण्डओभर गर्ने जिम्मा लिने ब्यक्ति थिए एल.बी मगर । २०७४ माघ ९ गते विमानस्थलमा सुन आईपुग्यो, तर एलबी आउन पाएनन्...
रहस्यमय बन्दै ३३ किलो सुन प्रकरण– प्रहरी अधिकृतदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म अनुसन्धानको घेरामा !
५ बैशाख २०७५, काठमाडौं । माघ ७ मा काठमाडौं भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन गायब भएको प्रकरण झनपछि झन रहस्यमय बन्न थालेको छ । यो घटनासँग जोडिएका तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ भने केही...